Al-Shabaab iyo dadka deegaanka Ceel-Cali oo ku dagaalamay dhagax qaali ah – Hornafrik Media Network
Al-Shabaab iyo dadka deegaanka Ceel-Cali oo ku dagaalamay dhagax qaali ah
By Liibaan Nuur	 On Feb 23, 2020
Wararka aan ka heleyno gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka Ceel-Cali ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo u dhaxeeya dadka deeganka iyo dagaalamayaasha Al-shabaab.
Iska hor imaadkaan ayaa yimid kadib markii sida la sheegay deegaanka lagu arkay Dhagax qaali ah oo dadka deegaanku ay heleen, taas oo sababtay in Al-Shabaab ay weeraraan dadkii helay dhagaxda qaaliga ah.
Inta la xaqiijiyay dagaalkaas ayaa waxa ku geeriyootay laba ruux oo shacab ah, halka Al-Shabaab uu iska hor imadkaas uu ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh, sida ay noo sheegeen dadka deegaanka.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan golaha shacabka kana soo jeeda deegaanada lagu dagaalamay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay loo soo farmuqay dadka helay dhagaxdaas, taas oo sababtay in ay weerar ku qaadaan.
Xildhibaanka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dhagaxda gaadiid sida lagu qabtay deegaanka Siinka-dheer ee duleedka magaalada Muqdisho, kadib markii ay ka war heleen in Muqdisho loo soo wado, si looga iibiyo dadka daneeya.
Axmed Madoobe oo Dhoobley ka wada kulamo ka dhan ah DF
Madaxwayne Erdogan oo xaaladda Suuriya kala hadlaya hogaamiyaasha dalalka Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka.